Fomba 12 hijanonana tsy hieritreritra zavatra - An-Tsaina
Fomba 12 hijanonana tsy hieritreritra zavatra
Na variana loatra amin'ny eritreritra tsara ianao na eritreritra ratsy dia variana.
Raha tsy azonao atao ny mijanona tsy mieritreritra zavatra iray ary lasa olana ho anao izany, misy fomba maro hamahana izany ary handroso.
Mety ho sarotra be ny mifehy ny saintsika indraindray, ary mety hahatsapa ho tsy azo atao izany, fa ny mitady fomba mety aminao fotsiny.
Izany no antony nanangananay fomba 12 tsara hampiatoana ny fieritreretana zavatra iray, mba hahafahanao miroso amin'ny fahatsapana fahasalamana sy fahasambarana amin'ny ankapobeny.
1. Alefaso ny fahaverezanao.
Ny dingana voalohany hanampiana anao tsy hieritreritra zavatra dia ny firesahana izany.
Fa inona loatra no itodihanao mafy ao an-tsainao?
Makà fotoana handaminana ny tena zava-mitranga, ary aza matahotra ny handavaka lalindalina kokoa. Ilay zavatra tena ezahinao halavirina dia mety tsy ho araka ny eritreretinao azy…
Ohatra, mety manasongadina anao ny fampisehoana any am-piasana. Nanapa-kevitra ianao fa te hijanona tsy hieritreritra momba ilay famelabelarana, nefa toa tsy dia mampiahiahy anao loatra izany.
Mety ho izany satria ny fampisehoana tsy tena manelingelina anao - ny fahatahoranao ny lehibenao. Olana hafa tanteraka izany, ary tsy hiala na dia mijanona tsy mieritreritra ny famelabelarana aza ianao.
Fa kosa tokony hiresaka ny olana amin'ny lehibenao ianao. Misy fomba iray ahafahanao miasa amin'ny fifandraisanao amin'izy ireo, azonao atao ve ny miresaka amin'ny departemantan'ny HR raha misy olana mitohy toy ny fanararaotana na fanorisorenana, afaka manao tatitra amin'ny olon-kafa ve ianao?
nxt uk tag tompon-daka amin'ny ekipa
Amin'ny alàlan'ny firesahana ny tena izy olana , ianao dia dingana iray akaiky kokoa hahitana ilay tena vahaolana.
Arakaraka ny ahafahanao mandinika an'izay mitondra ireo fahatsapana ireo sy ny antony mahatonga anao maniry hisoroka zavatra be loatra, no vao mainka anananao ny manamboatra azy - ary afaka mijanona tsy mieritreritra azy tsara!
2. Resaho izany ary mandroso.
Indraindray dia afaka manampy amin'ny famoahana ny eritreritsika hiala amin'ny rafitray fa tsy amin'ny fipetrahany ao an-tsaintsika izany.
Mety hidika izany fa miresaka momba azy ireo amin'ny olon-tiana iray izay tena atokisantsika.
Avelao ny tenanao hanao ny marina tanteraka amin'ny zavatra rehetra ifantohanao - miresaka momba ny zavatra tsapanao, inona ny vokatra tsindrinao na mahaliana anao, ary koa NAHOANA te ho afaka hijanona tsy hieritreritra an'io ianao.
Arakaraka ny ahafahanao misokatra no azo inoana fa hahafahanao manidy ny varavarana tsy ho ela.
Raha misy zavatra ezahinao hisorohana ny fisainana - na dia a tsara zavatra - ny fahazoana antoka fa ny namanao sy ny fianakavianao dia mahafantatra fa afaka manampy tokoa.
Mety ho sarotra izany rehefa mitondra lohahevitra ezahinao hialana ireo manodidina anao, ary ampahafantaro azy ireo ny zavatra tsy ny miresaka aminao dia afaka manamora ny fijanonan'ny eritreritra zavatra manokana.
Ampahafantaro azy ireo ny antony andramanao hialana amin'ireo eritreritra ireo, ary izy ireo dia ho mpanohana sy hahatakatra.
Ny olona tsy dia mampahatsiahy anao ilay zavatra ezahinao tsy hieritreretana, dia vitsy ny ‘triggers’ ary arakaraka ny ahafahanao mifantoka amin'ny fampidinana ny lohanao sy ny fizotran-javatra.
3. Aza mitsahatra miasa amin'ny zavatra hafa.
Na manandrana misoroka zavatra mety hahatonga anao hitebiteby ianao, na miezaka ny ho tony sy hijanona tsy hientanentana loatra amin'ny zavatra lehibe iray, ny fijanonana ho olona no fanafody tonga lafatra amin'ny eritreritra mandehandeha manodidina.
Ataovy izay tsy hampifantoka ny sainao amin'ny zavatra hafa araka izay tratra. Mety hidika izany fa mandany fotoana be dia be miaraka amin'ny namanao, mazoto, manao zavatra tsotra toy ny piozila ka mifantoka amin'izany ny ati-dohanao, na koa mijery seho mahafinaritra.
Na inona na inona hisambotra ny sainao ary hanasatra ny vatanao dia mety izany!
4. Vahaolana ny mety ho vokany.
Eny ary, ndao lazaina fa tsy mieritreritra zavatra ianao satria miteraka fihetseham-po ratsy, dia ny adin-tsaina, ny fanahiana na ny alahelo.
Matetika isika no tototry ny fahatsapantsika, indrindra ireo izay tsy tiantsika, ka tsy dia jerentsika loatra izy ireo. Azo takarina izany - maninona no tianao hipetraka miaraka amin'ireo fihetsem-po ireo mandritra ny fotoana lava kokoa noho ny tokony ho izy?
Na izany aza, amin'ny firesahana ireo fahatsapana dia afaka mahita fomba handresena izany ianao.
Manaova lisitry ny vokatra atahoranao. Andao lazaina fa manahy ianao sao ho very asa na inona antony. Mba hahafahanao mijanona tsy mieritreritra an'izany dia mila mieritreritra ny mety ho vokatr'izany ianao, manorisa azy ireo, ary avy eo mandroso.
Amin'ny fikaroham-bahaolana amin'ireo olana mety misy mifandraika amin'ny fahatsapanao dia azonao atao ny manidy ary mijanona tsy mieritreritra ilay olana intsony.
Ohatra, ny fahaverezan'ny asanao dia mety hiafara amin'ny vokatra marobe, ao anatin'izany ny fiezahana handoa ny hofan-trano, mahatsiaro ho menatra, mahita fa sarotra ny mahazo asa vaovao sns.
Noho izany, andao hofotorana ireo vokatra mety hitranga…
Azonao atao ny manomboka manangom-bola izao amin'ny fanaovana cutback kely, afaka miresaka amin'ireo olon-tianao izay hanome anao fahatokisan-tena sy hanohana anao, afaka manatsara ny CV ianao ary manomboka miresaka amin'ireo masoivohon'ny fandraisana mpiasa.
Tampoka teo, dia tsy dia mampatahotra ilay zavatra ezahinao hisaina, satria efa nanaiky izay olana hafa mety hitranga ianao, ary fantatrao fa manana drafitra napetraka ianao raha tokony hipoitra ireo olana ireo.
5. Aza diso be loatra ny momba ny zavatra tsara!
Izy io dia mitovy amin'ny hevitray etsy ambony, fa mifantoka amin'ny eritreritra tsara kokoa izay ezahinao hialana.
Angamba ianao manandrana tsy mieritreritra ny fitsingerenan'ny andro nahaterahanao izay ho avy, na ny fialantsasatra namandrihanao.
Mety hiezaka ny hisoroka ny fisainana ireo zavatra ireo ianao satria matahotra ianao sao tsy hitranga izany. Raha izany no izy dia azonao atao ny manaraka fomba fikafika hafa.
Andao lazaina fa nofoanana ny antokonao noho ny antony sasany, inona avy ireo safidinao hafa? Amin'ny fananana safidy vitsivitsy hafa ao an-tsaina dia tsy apetrakao amin'ny zava-mitranga rehetra ity ny zava-drehetra.
Misokatra kokoa amin'ny zavatra miova ianao ary ho malefaka kokoa sy hahazo aina kokoa ianao raha toa ka mila fanovana ny zavatra amin'ny minitra farany.
Amin'ny fananana hevitra hafa vonona ny handeha dia tsy hahatsapa ho diso fanantenana na sosotra ianao eo noho eo satria efa manana safidy hafa mahavariana ianao!
Toy izany koa, mety ho faly be ianao ary te hiverina amin'ny fahatsapana fandanjalanjana fotsiny. Azonao atao ny manampy ny tenanao hahatsapa ambaratonga bebe kokoa amin'ny fisainana NAHOANA faly be ianao.
Angamba tsy afaka miandry hahita namana sasantsasany ianao, ary mahatonga anao hahatsapa ho mihoampampana, na entanentanana be loatra. Raha tokony hivezivezy amin'ny 0 ka hatramin'ny 100 ianao dia afaka manomboka miakatra tsimoramora ka hatramin'ny 5 na 10 manomboka izao mandra-pahatongan'ny hetsika.
fomba milalao mafy mba hahazoana
Mety ho tafiditra amin'izany ny fananana antso an-tsary vitsivitsy miaraka amin'ny namanao alohan'ny fety lehibe, mba tsy dia ho trotraka ianao rehefa mitranga izany.
Mety hanampy ny maka dingana kely vitsivitsy hanomanana fialan-tsasatra mba tsy hifantoka amin'ny hetsika tokana tokana mitranga - angamba manomboka manangona entana ianao izao, na manambatra zotra fitsangatsanganana.
Eny, midika ara-teknika izany fa mieritreritra momba azy ianao, saingy mahatonga azy io ho azo tanterahina bebe kokoa amin'ny sehatra ara-pientanam-po. Raha tokony hitranga amin'ny hetsika lehibe iray dia manana dingana vitsivitsy ianao amin'ny fananganana izany izay hanampy anao hitantana tsara kokoa ny fihetsem-ponao.
6. Mialà saina momba ny fahafaha-manao vaovao.
Raha somary manonofinofy ianao na mifantoka amin'ny nofinofy manokana momba ny hoavinao dia mety hanampy anao tokoa izany. Mety manandrana manaparitaka ny eritreritrao ianao mba tsy hoentina be loatra ianao na hiorina amin'ny vokatra tokana.
Aleo mieritreritra safidy isan-karazany fa tsy mijanona amin'ny safidy iray!
Midika izany fa ho lasa tsy dia mifandray am-po amin'ny nofinofinao tokana ianao, ary tsy dia hahay hifehy anao sy hihazona anao, hanamora ny fijanonanao eritreritra.
7. Saintsaino ary ampiharo ny fahatsiarovan-tena.
Iray amin'ireo fomba tsara indrindra esory ny saintsika zavatra dia ny misaintsaina. Ity dia fomba tsara iray hampihenana ny saina ary hifantohana amin'ny misy fotsiny amin'izao.
Na manandrana mijanona tsy mieritreritra zavatra ratsy ianao, na manandrana tsy manonofinofy be loatra, dia mety handray soa avy amin'ny fahatsiarovan-tena.
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hampiharana ny fahatsiarovan-tena dia ny fidirana amin'ny zavatra antsoina hoe 'fanamarihana.' Ity dia fomba fitantanana ny eritreritrao sy ny fihetseham-ponao rehefa misaintsaina ianao.
Midika indrindra fa ny fanekena ireo fanelingelenana mitranga rehefa misaintsaina ianao, ary manamarika raha fahatsapana ara-batana (tongotra mangidihidy, lamosina marary lamosina, sns) na eritreritra.
Amin'ny alàlan'ny firesahana ireo fanelingelenana dia azonao atao ny mamela azy ireo hanasa anao - matetika rehefa miezaka mafy isika mba hisorohana ny eritreritra fa miraikitra ao an-tsaintsika izany ary tsy azontsika atao ny mifantoka aminy.
Misy fampiharana marobe mahatalanjona any izay afaka mitarika anao amin'ny fisaintsainana raha mbola tsy nataonao taloha. Manaova mozika mampitony, mahazoa aina, ary miomàna hivoaka!
Arakaraka ny ahafahanao misaintsaina matetika dia vao mainka ho zatra miala sasatra sy milamina ny sainao. Antenaina fa rehefa misy eritreritra sasany mipoitra dia azonao atao ny mamela azy ireo handalo ao an-tsainao fotsiny fa tsy mifantoka aminy na manahirana azy.
Amin'ny fidirana amin'io fahazarana io, ny saintsika dia mampifandray ity fotoana misaintsaina ity amin'ny fialana sasatra kokoa ary tsy mifantoka be loatra amin'ny eritreritra rehetra.
8. Miala sasatra ary mifantoha amin'ny fikarakaran-tena.
Raha sarotra aminao ny mamela ny eritreritra iray handeha amin'ny fotoana irinao mafy hahafahanao tsy mieritreritra zavatra fotsiny dia mety mila fitsaharana bebe kokoa ianao!
Mety ho toa cop-out kely ilay izy, fa rehefa reraka isika dia afaka mandositra tena mora foana ny saintsika.
Raha tsy matory isika na mihodina kely dia miakatra ny haavon'ny adin-tsaina, izay mety hidika fa mifikitra amin'ny eritreritra ny saintsika ary tampoka izany dia rehetra azontsika atao ny mieritreritra.
daniel bryan sy brie bella
Efa nahatsikaritra ve ianao fa ilay zavatra ezahinao hisorohana ny fisainana dia tsy raharaha lehibe loatra? Fa kosa, ny fiheverana hafahafa ananan'ny ati-dohanao amin'izany no mahatonga anao hahatsapa fanahiana na adin-tsaina bebe kokoa?
Raha mahazatra izany dia toa azo inoana fa mihazakazaka ianao ara-tsaina sy ara-pientanam-po, ary mila fitsaharana bebe kokoa ianao.
Tadidio fa ny zavatra toy ny sakafo ara-pahasalamana, ny fanatanjahan-tena sasany, ny rano ampy, ny tara-masoandro ary ny rivotra madio dia samy manana ny fahasamihafanao amin'ny zavatra tsapanao.
Raha miady amin'ny eritreritrao ianao ary mahatsapa fa tsy mahafehy ny sainao dieny izao dia mifantoha amin'ny fiadananao.
Io angovo apetrakao amin'ny fanerena anao io zavatra eritreretinao io? Ampidiro amin'ny fikolokoloana tena izany, ary fenoy yoga ny sarinao, saron-tarehy, fitsaboana, famelarana, hipetrahan'ny masoandro.
Ataovy izay rehetra azonao atao mba hahatsapanao ho tsara kokoa ary hiala sasatra voajanahary ny sainao, manampy anao tsy hieritreritra zavatra efa mahasosotra anao.
9. Tadidio fa handalo izany.
Averina indray fa ity dia mety ho tena fototr'asa na mora loatra - fa manampy. Raha vantany vao tsapanao fa ireo eritreritra ireo dia tsy hampijaly anao mandrakizay, ary tsy ho ela ianao dia afaka amin'ny zavatra manaloka anao, dia ho hitanao fa mora kokoa ny mamela ireo zavatra ireo handeha ary tsy hijanona intsony.
Ny zavatra mety hitranga, indrindra amin'ny eritreritra ratsy, dia ny fananantsika eritreritra, mahatonga antsika tsy mahazo aina, manandrana manilika azy isika, mifantoka amin'ny fahatsapantsika mahatsiravina noho izany, miverina ny eritreritra satria mifantoka foana amin'ny fomba nahatonga antsika hahatsapa - sns.
Izany dia azo ampiharina amin'ny eritreritra tsara, fa tsy tokony mahazo aina, dia faly isika na faly, na miteraka famoahana dopamine (hormonina mahatsapa fahatsapana) ary avy eo tafiditra ao anaty tsingerina isika.
Miezaha mahatadidy fa ity eritreritra ity dia tsy handratra anao lava kokoa, ary ho afaka hijanona tsy hibontsina sy hieritreritra momba azy ianao.
10. Mampiasà ho tonga ho azy.
Ny sasany amin'ireo sosokevitra ireo dia kendrena kokoa amin'ireo olona izay mahita fa sarotra ny mijanona tsy mifantoka amin'ny eritreritra ratsy. Ahoana anefa raha manandrana mitsahatra tsy mieritreritra zavatra iray mahaliana anao ianao?
Raha tena mientanentana amin'ny zavatra iray ianao dia misy vintana efa nomaninao tao an-dohanao izany rehetra izany. Ny maha-planner anao dia tsara amin'ny lafiny maro, fa mety hiteraka anao ho lasa variana amin'ny sisintany kely ihany koa izany.
Raha manandrana misoroka ny fisainana zavatra kasainao hatao ianao dia afaka mandray dingana kely.
Ohatra, miezaha hanao zavatra tsy kasaina! Tsy mila zavatra toy ny fiverenana eny amin'ny seranam-piaramanidina sy famandrihana ny sidina manaraka, aza manahy.
Mety ho toy ny fiantsoana olona izany nefa tsy manomana mialoha ny fotoana, maka kafe fotsiny satria nandalo tany amin'ny toerana iray izay toa mahafinaritra ianao, na mitady toerana hisakafoanana hariva nefa tsy nanao famandrihana voalohany.
Ireto misy fomba tsara ahafahanao zatra tsy mandamina, ary azonao atao amin'ny namana izany raha tsy mahazo aina ianao manandrana azy irery fotsiny.
Arakaraka ny ahafahanao mahazo aina amin'ny tsy fandaminana zavatra na ny tsy fahalalana ny antsipiriany kely sy bitika, dia vao mainka hanamora ny fisainanao ianao.
Raha mifantoka amin'ny fieritreretana zavatra nomaninao ianao, dia afaka manampy tokoa ny fihemorana.
Zatra tsy dia mahazo aina loatra ary manao zavatra nefa tsy manao sarintany isaky ny minitra amin'ilay hetsika. Hanampy anao tsy hieritreritra zavatra milalao ao an-tsainao intsony izany, ary afaka mankafy fotsiny ny miaraka amin'izao fotoana izao ianao.
11. Fitsaboana anaty rano.
Tsy mandeha amin'ny rehetra izany! Na izany aza, mety ho hitan'ny olona sasany fa manampy ny mandany fotoana kely amin'ny fifantohana amin'ilay eritreritra tian'izy ireo hialana. Toa mihemotra izany, fantatsika, saingy mahazaka antsika…
Indraindray, lasa sarotra be ny misoroka ny eritreritra satria manandrana manidy azy ireo isika raha vao mipoitra izany. Ohatra, ny vadinao taloha dia mety hiditra ao an-dohanao fa tsy te-hiatrika ny fahatsapana izany ianao - fa kosa mitsambikina eo amin'ny famoloana ianao, mametaka ny mozika, na mandeha misotro miaraka amin'ireo namanao.
Ny tetika fisorohana dia mety miasa amin'ny olona sasany ary ny fikirizana dia mety hanelingelina be, araka ny voalaza tetsy aloha tamin'ity lahatsoratra ity. Na izany aza, ny sasany amintsika dia mila mipetraka tanteraka amin'ny eritreritsika alohan'ny ahafahantsika miala aminy.
Hamarino tsara fa manana rafitra mpanohana matanjaka manodidina anao ianao, ary avelao ny tenanao hizaha ilay eritreritra ezahinao hialana. Ity fisitrika lalina iray ity dia hanampy anao amin'ny fotoana maharitra, ary hanamora ny fijanonan'ny sainao momba azy io.
Avelao hitomany sy hisosa ianao, hahatsapa ny zavatra tsapanao ary ekeo izay mitranga ao an-tsainao.
Ny fananana an'ity fotoana ity dia mety hitondra karazana fanidiana anao, izay hanamora ny fijanonany amin'ny eritreritrao ny olana amin'ny ankapobeny.
12. Mitadiava fanampiana matihanina.
Raha sahirana ianao mijanona tsy mieritreritra zavatra (na ratsy na mampientam-po) ary manomboka miantraika amin'ny fiainanao na ny fiainanao, dia mety ny miresaka amin'ny olona iray izay afaka manampy tokoa.
ny fomba hanehoana fankasitrahana amin'ny fifandraisana
Ny fikatsahana fanampiana matihanina dia hahafahanao mahita fomba handresena ireo lamina eritreritra manjavozavo. Izy ireo dia ho afaka hanolotra sosokevitra vitsivitsy momba ny fomba hanatsaharana ny tsingerin'ny eritreritrao, toy ny CBT - na Cognitive Behavioural Therapy.
Izany dia afaka manampy anao mamorona lamina na fahazarana mahasalama izay amin'ny farany manampy anao tsy hieritreritra zavatra iray izay manohina anao.
Raha heverinao fa afaka mampiasa fanampiana matihanina ianao dia tsindrio eto raha hijery mpanolo-tsaina akaiky anao, na olona afaka miara-miasa aminao amin'ny Internet avy amin'ny fiononan'ny tranonao manokana.
Soso-kevitra izahay ny hanandrana paikady vitsivitsy mba hahitana izay mety indrindra aminao. Aza adino fa tsy hiova izany amin'ny alina, ary ny fikarakarana ny tenantsika sy ny saintsika dia fanoloran-tena maharitra.
Manomboha anio amin'ny alàlan'ny fampiharana fahazarana mahasalama, manodidina anao amin'ny olon-tianao, ary jereo amin'ny fanampiana matihanina raha toa ka tsy voafehin'ny zavatra ianao.
Mbola tsy azonao antoka ny fomba hijanonana tsy hieritreritra zavatra? Miresaha amin'ny mpanolotsaina iray androany izay afaka mitarika anao mandritra ilay fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Ahoana ny fomba hampijanonana ny fanaovana tsimoka: toro-hevitra 12 hampanginana ny eritreritra miverimberina ratsy
Fomba 8 mahomby hampijanonana ny eritreritra ratsy eo amin'ny lohanao
Tapaho ny tsingerin'ny eritreritra miverimberina amin'ny alàlan'ny famerenana ny sainao toy izao
Ahoana ny fomba hampifangaroana ny fihetsem-po sy ny eritreritrao
Eritreritra manelingelina - Inona izy ireo ary ny antony ara-dalàna tanteraka
Fanamafisana 6 hamerenana rehefa be loatra ny eritreritrao
Ahoana ny fomba hampijanonana ny nofinofy be loatra
Ahoana ny fomba hiainana amin'izao fotoana izao: toro-hevitra tsy misy toro-hevitra 13!
Hevitra manimba 10 izay mahazatra kokoa noho ny eritreretinao
Ahoana ny fomba hananana tombony: dingana 12 mahomby amin'ny toe-tsaina tsara kokoa
rehefa tsy afaka manao zavatra mety
ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fiainana
ny fomba hanaovana ny lehilahy malahelo anao toy ny adala
handeha hiady indray ve i ronda rousey
ny fomba hiatrehana olona iray izay tsy namela anao
hamela famantarana ny vadiny va izy?